​जिन्दगीमा यस्तो पनि हुन्छ कहीं ? « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : २८ पुष २०७४, शुक्रबार १४:२९
– राजपाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भोट पाएको छ । कञ्चनपुरमा प्रत्यक्ष सिट जित्यो । एक नम्बरलगायतका क्षेत्रमा चुनाव जित्दा दुई नम्बरमै सीमित भन्न मिल्छ ? राजपा मधेसकेन्द्रित भए पनि संगठन मेचीदेखि महाकालीसम्म छ । यसबाट आगामी दिनमा कमजोर भएको ठाउँमा मजबुत बनाउने प्रेरणा मिलेको छ । मधेसको हकमा भने हाम्रो संगठन मजबुत नै छ ।